Izindaba - Wonder Woman 1984 ikhombisa ubunjalo bangempela bomuntu futhi ihlola amandla angaphakathi endabeni yokukhula
IWonder Woman 1984 ikhombisa ubunjalo beqiniso bomuntu futhi ihlola amandla angaphakathi endabeni yokukhula
IWonder Woman 1984 ikulolu shintsho kumabhayisikobho asekhaya. Namuhla, ividiyo yezwi lomlomo ivezwe ngumdidiyeli wefilimu. Lo mlando othinta inhliziyo futhi ufudumele obandayo wokukhula kukaWonder Woman ucwilisa kakhulu kangangokuthi abantu abakwazi ukuwususa.Ifilimu igwema izinkulumo ezithi “zenziwe zaba nobuso”, ikhombisa ngokusobala “ubunkulunkulu” bukaWonder Woman “nobuntu”, futhi yenza abalingiswa babe ngokoqobo futhi enamandla. Njengoba umqondisi uPatty Jenkins esho, “Siyakwazi ukuzibona kubalingiswa futhi siqonde futhi sizwe wonke umuntu osendabeni.” Njengoba uKhisimusi usondela, imfudumalo nothando oludluliswa yile filimu nakho kuzoba yisipho esiqotho kubo bonke abalaleli.
IWonder Woman Diana ibilokhu iwuphawu “lukaNkulunkulu.” Unomusa, ukhaliphile, unamandla, unothando futhi akanakunqotshwa.Kodwa kwiWonder Woman 1984, uDiana wembula uhlangothi lwakhe olufihlekile - ukuthi yena, njengomuntu, angahlushwa imizwa enyanyekayo, futhi ahlukaniswe phakathi kothando nokulunga.。Lokhu "kungapheleli" kumenza athandeke kakhulu kunalokho. UGal Gadot wake wathi enkulumweni yakhe: “UWonder Woman unobungozi bakhe, futhi lokhu kuba sengozini okungisiza ukuthi ngimenze atholakale futhi abe nozwelo.” I-akhawunti esemthethweni ye-movie ethi, "Kukhona i-Movie," ichaza uWonder Woman ngokuthi "onozwela futhi ofudumele." Kukhona nabalandeli abasho ngokungagwegwesi, ifilimu ihlubule igobolondo elingumninimandla onke, ikhombisa ukumangala koMfazi "njengomuntu" wemizwa yangaphakathi kwemizwa, kuyisimanga ngokuphelele nokugqamisa.
Ngaphezu kwalokho, ifilimu ibuye iveze izikhohlakali ezimbili, uBarbara owesifazane weNgwe noMax Lord, emazingeni amaningi.Uguquko lowesifazane wesifazane kusuka ekubeni "obala okuncane" komphakathi abe yisidlakela esiphakeme ezingeni neWonder Woman kukhuthazwa kakhulu ukwedelela ake wakuzwa, nokuzizwa okungekuhle kokufeza okuthile lapho ezwa isifiso esamnaka.UMax Lord, esinye isikhohlakali, naye ungumuntu odabukisayo. Ufuna ukuzuza ukwamukelwa yindodana yakhe ngezinga nangengcebo, kodwa konke okudingwa yindodana yakhe ukugonwa yiyo. ”UBarbara noL Lord bobabili bangabantu,” kusho uPedro PASCAL, odlala indawo kaNkosi. “Kwibhayisikobho enkulu, akuvamile ukuthi sisebenzise abantu ukumela abanamandla kakhulu noma ababi kakhulu. Zombili izinhlamvu, ezinhle noma ezimbi, zinesici esingumuntu kubo. ”
Iqondiswe nguPatti Jenkins, “iWonder Woman 1984 ″ izinkanyezi uGal Gadot, uChris Pine, uKristen Wiig, uPedro PASCAL nabanye, kanti njengamanje udlala ezinkundleni zemidlalo yeshashalazi ezweni lonke.